Red Hat ine logo nyowani, yazvino uye isinganyatso kujeka | Linux Vakapindwa muropa
Nguva pfupi yapfuura Red Hat Summit 2019, kambani yakafumura mufananidzo wayo mutsva. Tiri kutaura nezve yavo logo, iyo yakanga isati yagamuchira chero shanduko mukati angangoita makore makumi maviri. Iyo kambani, izvozvi yave neIBM, yafunga kuita ne logo yayo chinhu chimwe chete icho zviri kuitwa nemakambani ese, zvese zviri mumufananidzo weanoshanda masisitimu, pamwe nemusoro wenyaya, mifananidzo nezvimwe, ndiko kuti, kurerutsa. Chaimboratidza ngowani tsvuku, musoro nemhando mbiri dzakasiyana dzetsamba, zvava kuita zvakafanana.
Izvi zvaziviswa mune blog post, kwavanotitsanangurira kuti zvese zvakatanga pakutanga kwa2017.Rogo yapfuura yakatarisana nematambudziko akati wandei: haina kupa zvakanakisa mumafomati edhijitari, kunyanya mune zvidiki, uye yaida kuvandudzwa. Uye zvakare, mufananidzo wemurume ane rima kumashure uye ane chiso chisina kunyatsoonekwa hazvina kukurudzira kuvimba kwakanyanya. Chikwata hachina kufarira zano iri, asi vakapedzisira vafunga kuti kugadzira logo nyowani ndiyo ichava mhinduro yakanyanya.
Nyowani Red Hat logo inokurudzira kuwedzera kuvimba
Red Hat yanga iri munyika yeLinux kwenguva yakareba uye vazhinji vedu taiziva logo yayo nekutarisa chete, asi dambudziko harisi muvanhu vaimuziva kare, asi mune avo vasina kumbomuona. Uye ndizvozvo. Kana tikatarisa iyo logo yapfuura uye tichiedza kufungidzira kuti ndiyo kekutanga nguva yatinozviona, fungidziro yatinowana ndeyekuti ichi chinhu chikuru chekubira pane che software chakaitirwa ruzhinji rwevanhu.
Kune izvi zvese, kambani yakafunga kuchinja logo, shanduko inova yekutanga mune angangoita makore makumi maviri. Iwe une mhedzisiro inotungamira iyi posvo. Mune mawonero angu, ndinofunga zvinoita kunge zvirinani nhasi, asi ini ndiri munhu asingade shanduko uye zvinonditora kuti ndijairire. Chero zvazvingaitika, ndinofunga kuti nguva icharatidza kuti logo nyowani chaiyo. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat ine logo nyowani, yazvino uye isinganyatso kunzwisisika
Maitiro ekuisa Megasync pane Arch Linux uye zvigadzirwa uye gadzirisa ibcryptopp.so kukanganisa?